အချစ်အက္ခရာ A to Z… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချစ်အက္ခရာ A to Z…
အချစ်အက္ခရာ A to Z…
Posted by minhtetthar on Jan 3, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
သူ့အားနည်းချက်အပါအဝင် သူ့ရဲ့အရာအားလုံးကို လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။
အချစ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းတွေ လိုပါတယ်။ တစ်ဘက်သားကို မယုံကြည်ဘဲ အမြဲသံသယအမေး၊
သံသယအတွေးတွေနဲ့ အချစ်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ရင် နောက်ဆုံးမှာ
တစ်ဘက်သားကို ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးပေးမှုကို
“အလုပ်ပင်ပန်းလား?”ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်တဲ့ အမေးလေးမေးနိုင်သလို “မိုးအေးပြီနော်…
မမေ့နဲ့နော်”ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့လေးလည်း ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဂရုစိုက်မှုတွေက
တကယ့်အသုံးမနိုင်ဝင်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူ့စိတ်ကို
လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင် သစ္စာခိုင်မြဲရတယ်။ လှေနံနှစ်ဖက်နင်းတာက
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို နာကျင်ဝမ်းနည်းစေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးမှာ လမ်းခွဲတာနဲ့ပဲ
တစ်ဘက်သားရဲ့အရာအားလုံးကို ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံတဲ့အပြင် အချစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့
ပျော်ရွှင်၊ ကြည်နူးခြင်းတွေကိုလည်း ကျေကျေနပ်နပ်ခံစားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ
လက်ထပ်ပြီးအတူနေသည့်တိုင် တစ်ဘက်သားကို ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုနဲ့
လျှို့ဝှက်ချက်တချို့ ရှိစေသင့်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အိမ်ထောင်ကျတာဟာ
ထောင်ထဲရောက်သွားသလို အချုပ်နှောင်ခံတာမျိုး တစ်ဘက်သားကို မခံစားစေချင်ဘူး။
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ကိုယ်ပေးဆပ်တိုင်း ပေးဆပ်သလောက် ပြန်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။
မပေးဆပ်ရင်တော့ လုံးဝပြန်ရဖို့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ပေးဆပ်သလိုမျိုး တစ်ဘက်သားက
အချစ်မှာ အရေးအပါဆုံးအရာက နှလုံးသားတစ်စုံပဲဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားကို
နှလုံးသားနဲ့ရင်းပြီး ချစ်သင့်တယ်၊ ကြင်နာနားလည်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်ခြင်းမှာ
စကားပြောကောင်းတဲ့ချစ်သူက “ငါဟာ မင်းအတွက်မွေးဖွားလာတာပါ” လို့ပြောတတ်ကြတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုတွေရှိကြတယ်။ တစ်ဘက်သားကို အလွန်အကျွံ မှီခို၊ အားကိုးတာက
သင့်တင့်တဲ့ မနာလို၊ သဝန်တိုမှုတွေက သူဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း
တစ်ဘက်သားကို ခံစားစေတယ်။ သဝန်တိုဖို့
အကျိုးအကြောင်းညီမျှရမယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အကျိုးအကြောင်း
သဝန်တိုမှုတွေက တစ်ဘက်သားကို မလိုလားမှုတွေ
အနမ်းတစ်ပွင့်က စကားအခွန်းထောင်သောင်းထက် သာလွန်ပါသတဲ့။
ကိုယ့်မြတ်နိူးမှု၊ ကြင်နာမှုကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ချစ်တာနဲ့ နှစ်သက်တာမတူပါဘူး။ ချစ်မိပြီဆိုရင် တစ်ဘက်သားအတွက် အရာရာပေးဆပ်ရဲပါတယ်။
တချို့က အချစ်ဦးနဲ့ ဘာကြောင့်အလွယ်တကူ ကွေကွင်းကြရသလဲ?
ရည်းစားထားချိန်မှာ ကလေးဆန်စိတ်တွေ များနေခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ အဆင်ခြေမရှိ
မကြီးပြင်းတတ်တဲ့ကလေးကို အမြဲအလိုလိုက် ချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်
အချစ်လည်းရင့်ကျက်ပြီး လှပတဲ့အဖူးအပွင့်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်
ချစ်စကြင်စမှာ လူတွေက ကိုယ့်အားနည်းချက်၊ အနာအဆာကို သိုဝှက်ပြီး
ဟန်ဆောင်နေတတ်ကြတယ်။ အဲဒီအားနည်းချက်တွေက နှစ်ကြာမှ တဖြေးဖြေး
ပကတိအတိုင်းချစ်မယ်၊ သဘာဝအတိုင်း ဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းခဲ့ရင် အချစ်က
Observe (ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုမှတ်သား)
တစ်ဘက်သားရဲ့ ဝါသနာ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကို ဂရုတစိုက်မှတ်သားခြင်းဖြင့်
တစ်ခါတလေမှာ သူ့ကို ထူးဆန်းအံ့သြအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-
စာအုပ်ထဲကနာရီကို သူသဘောကျကြောင်းပြောခဲ့ရင် သူ့မွေးနေ့မှာ
တစ်ဘက်သားရဲ့အကြိုက်ကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့စိတ်က လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထက်
ယောက်ျားလေးချစ်သူက မိန်းကလေးချစ်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပါ။
ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးချစ်သူကလည်း ယောက်ျားလေးချစ်သူရဲ့
လေးစားမှု၊ မျက်နှာသာပေးမှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရပါမယ်။ လူတွေကြားမှာ
ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေ မရဖို့ သတိထားရပါမယ်။
ခွင့်လွတ်သည်းခံခြင်းတွေ အချစ်မှာမရှိမဖြစ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။
သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ကိုယ့်အတွက် ချစ်သူပေးဆပ်တဲ့အရာတိုင်းကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံမျိုး ထုတ်မပြသင့်ပါဘူး။ အဲဒီအပြုအမှုတွေက
ချစ်သူပေးဆပ်တာကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်တဲ့အသွင်နဲ့ လက်ခံပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ
တကယ်ချစ်ကြပြီဆိုရင် ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကို အတူတကွမျှဝေသင့်ပါတယ်။
ဘဝဖော်တစ်ဦးရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး ဝတ္တရားပဲဖြစ်တယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့ အမူအကျင့်ကို နားမလည်နိုင်ခဲ့ရင် အချစ်ဟာ အထီးကျန်ပြီး
တစ်ဘက်သားရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီး တွေးတောခံစားပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဘက်သားကို
Veracity (ဖြောင့်မှန်၊ မှန်ကန်ခြင်း)
အချစ်မှာ ဖြောင့်မှန်၊ မှန်ကန်ခြင်းတွေ အဆတစ်ရာလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း
ကိုယ့်ချစ်သူကို “အပြောသမား” တစ်ယောက် မဖြစ်စေချင်သလို သူကလည်း
အချစ်မှာ စောင့်တာက အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးဖြစ်တယ်။ တစ်ဘက်သားနဲ့
အတူကြီးပြင်းရှင်သန်သင့်ပါတယ်။ ခရီးလမ်းဆုံးထိ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး
ဖေးမစောင့်စားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်အရင် ခြေလှမ်းလှမ်းပြီး တစ်ဘက်သားကို
ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို နေ့တိုင်းဆတိုးပြီး မြှောက်သွားခဲ့ရင်
နှစ်ယောက်အတူနေချိန်မှာ ငြင်းခုန်မှုက ရှိစမြဲဖြစ်တယ်။ နောက်ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်
အလျော့ပေးတာက ဒေါသမုန်တိုင်းကို ငြိမ်းအေးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြဿနာကို သဲသဲကွဲကွဲ
သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်တွေငြိမ်သွားမှ ပြဿနာရင်းမြစ်ကိုရှာပြီး ဖြေရှင်းနည်းတွေ
အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲပြီလို့ မှတ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချစ်ရေးခိုင်မြဲပြီလို့
ထင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်နေချိန်မှာ အရင်ညားစ၊ ချစ်စ၊ ကြင်နာစက
ခံစားချက်မျိုး၊ စိတ်သဘောထားမျိုးထားဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ တည်မြဲပြီလို့ မှတ်ယူပြီး
ပစ္စလက္ခမထားဘဲ၊ အနယ်မထိုင်စေဘဲ နေ့တိုင်းအချစ်ကို အသစ်အသစ်အဖြစ်နဲ့
လူတွေက အချစ်ကို အမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုကြပါတယ်။ ဖွဲ့ဆိုကြတဲ့အထဲမှာ
အချစ်တာရှည်ခိုင်မြဲဖို့၊ ချစ်ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူး သာယာဖို့ အဓိကထား
ရေးဖွဲ့ကြပါတယ်။ အချစ်အက္ခရာ A to Zကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာနဲ့
ဖတ်ဖူးကောင်း ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အချစ်က ဘယ်တော့မှ ဘာသာပြန်ဆိုလို့
ပြီးနိုင်မယ့်အရာမဟုတ်တာကြောင့် အဲဒီအချစ်တွေကိုပဲ ကျွန်တော်က
အချစ်အက္ခရာ A to Z လက်ခံသည်ကပဲ စမှတ်စခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး
ချစ်သူများအတွက် လိုက်နာဖွယ်ရာလေးတွေ ရှာရျာဖွေဖွေ တင်ပြပေးတာ ချစ်သူများ(ချစ်သူရှိတဲ့သူများကိုယ်စား)ကျွန်တော် နေ၀န်းနီမှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပါစေ
ချစ်သူ ရှိနေတဲ့ သူများ လိုက်နာကြပေရော့ နော့။ ချစ်သူများ အခြေခံဥပဒေ အဖြစ် ပြဌာန်းသင့်ပါကြောင်း…………….
အချစ်ဆိုတာ ဥပဒေမှမဟုတ်တာ။ ဒါတွေဘာတစ်ခုမှမသိဘဲနဲ့ အချစ် ဆိုတာကို ရင်ဘတ်ထဲမှာ သိသွားရင် ဘာဥပဒေမှကိုမလိုတော့တာ။ အချစ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့လူမှရတယ်။ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းလို့ရရင် အချစ်ဆိုတာ ဘယ်ရှားတော့မလဲ။ ဘယ်လောက်တောင်ရှားသလဲဆိုရင် လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်ပါပဲ။ ဒါတောင် လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ဆိုတာ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ perfect ဖြစ်နေတယ်။ စည်းမျဉ်း မလိုဘူး။ ဥပဒေမလိုဘူး။
အချစ်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက နားလည်မှုလို ထင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ရှားပါးစိန်ပြာတစ်တုံးကို ရရင်ယူမလား။ ယူမှာပဲမဟုတ်လား။ စိန်ပြာထက် ပိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့အချစ်စစ်ကို လက်လွတ်ခံရင်မိုက်လို့ပေါ့ကွယ်။ ခက်တာက အချစ်ဆိုတာ လုပ်ယူလို့မရတာပဲ။ အချစ်ဆိုတာ အရိုးသားဆုံးအရွယ် မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဆန်းပြားဆုံးခံစားချက်လို့ ပြောရင်ရူးတယ်ထင်မလား။ အချစ်ဆိုတာ သူ့ဟာသူပြီးပြည့်စုံပြီးသား အမြုတေရတနာတစ်မျိုး။ လူ့ဘ၀မှာ လူသားကိုထိန်းကွပ်သွားတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အချစ်နဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ ငွေပေါလည်း ခုချိန်ထိ အနှိပ်ခန်းမသွားဘူး။ ဒါ အချစ်က ထိန်းချုပ်သွားတာ။ မယုံချင်လည်း ရတယ်။
အားပါး။ ခင်ဗျားမိန်းမက အတော်အနှိပ်ကောင်းပုံရတယ်။ ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတာပေါ့။
ခုတလော.. မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး … မိန်းမသွားယူတဲ့..သူတွေတော်တော်များနေတာတွေ့တာပဲ..။
တချို့ ဆို ခေါ်ပြီးပြန်လာတာ…ယူအက်စ်ပြန်တောင်ရောက်နေပြီ..။
အစအဆုံး.. ၁လလောက်မှာတင်… အကုန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့.. မိန်းကလေးခမြာ.. ဒီရောက်မှ .. ကာချာရှော့ဖြစ်ရတဲ့အထဲ.. ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ သူရင်ခွင်ထဲနေရတော့ …
အောင်မလေး..အချစ်စစ်လား…အချစ်စစ်ပွဲလား…။ စစ်ပွဲအချစ်လား..။ အ,ချစ်တာလား..အ,ချစ်,စစ်လား..မသ်ိတော့ပါခင်ဗျား..။
အချစ်အကြောင်း ပြောသွားတာတော့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ဘဲ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေတာ ဘယ်အပိုင်းမှာပါလိမ့်။ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး တွေမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ သိချင်လို့ပါ။ ချိတ်ချိုးပါနဲ့။